Famokarana LSR & Rubber - Chapman Technology Co., Ltd.
Chapman Maker dia afaka manome ny fizotran'ny fanaraha-maso kalitao avo lenta takiana amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana sy fitsaboana. Chapman Maker ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016 / NS-EN ary ISO 123485: 2016 no voamarina, ary mirehareha izahay ho iray amin'ireo taha ambany indrindra amin'ny kilema eto amin'ny indostrianay.
Chapman MakerNy efitrano fanadinana ISO 8 voamarina ISO, ary koa ny trano fidiovana NKS's Class 7 any Singapore dia misoroka ny fahalotoan'ny vovoka sy ny sombin-drivotra hafa ary mahafeno ny fenitra ISO ilaina amin'ny famokarana fahadiovana.
Amin'ny maha iray amin'ireo orinasa mpamolavola tsindrona voalohany, Chapman Maker miasa manokana amin'ny famolavolana tsindrona fingotra silika. Manana ny fahaiza-manao amin'ny famokarana izahay mba hanomezana tolotra izay manomboka amin'ny prototyping ka hatramin'ny famokarana serial ny singa tena avo lenta. mampifanaraka ny fizotran'ny QA izahay mba hahatratraranao ireo fepetra takinao manokana.